कांग्रेसले छायाँ सरकार तयार, को–को भए मन्त्री? (नामसहित) - Everest Dainik - News from Nepal
कांग्रेसले छायाँ सरकार तयार, को–को भए मन्त्री? (नामसहित)
काठमाडौं, जेठ ७ । नेपाली कांग्रेसले छायाँ सरकार तयार गरेको छ । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदीय दलको विधानको धारा ९ को उपधारा ५ (क) अनुसार छायाँ सरकारको रुपमा काम गर्न मन्त्रालय स्तरीय समन्वय समिति तयार गरेका हुन्।